Laftagareen oo u ambabaxay Baydhabo iyo doorasho ka bilaabaneysa | Banaadir Times
HomeUncategorisedLaftagareen oo u ambabaxay Baydhabo iyo doorasho ka bilaabaneysa
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Muqdisho ayaa u duulay Magaalada Baydhabo ee Xarunta Goblka Baay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maalmahaan Muqdisho ka waday kulao lagu dhex-dhexaadinayo Madaxda Dowladda, Midowga Musharixiinta & Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland oo isku khilafsan arrimaha doorashooyinka.
Wararka qaar ee laga helayo safarka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in Maamulka Koonfur Galbeed uu noqon doono Maamulkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada Aqalka Sare.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in weli Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu wado dadaalada xal raadinta ah, isla markaana uu la xiriiray Madaxweynayaasha jubbaland & Puntland oo aad uga soo horjeeda sida ay Xukuumadda Soomaaliya u wajaheyso arrimaha doorashhoyinka.
Previous articleQarax Askar Kenyan ah lagu dilay oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose.
Next articleLaamaha Amniga Magaalada Dhuusamareeb oo amar la dhul-dhigay